KAYDINTA BARADHADA DUKAANKA KHUDRADDA: MAXAY TAHAY XAALADAHA IYO HEERKULKU WAA INAY SIDAAS U NOQDAAN MIRAHA XIDIDKU UUSAN KHASAARIN XILLIGA QABOOBAHA, IYO HABKEE JIRA? - WIXII MARTIDA
Dhamaan oo ku saabsan kaydinta habboon ee baradhada dukaanka khudradda: xaaladaha, heerkulka, talaabooyinka iyo hababka
Baahida loo qabo badeecooyinka xilliga barafka ah ayaa sare u kacaya sanadka oo dhan. Haddii goobaha kaydinta aan la ogaanin, digriiga way luminayaan dhadhanka iyo tayada, noqdaan kuwo jilicsan, jilicsan oo madow. Si aad u koraan goosashada wanaagsan ee baradhada, waa inaad si adag u shaqeysaa.
Waxa kale oo muhiim ah in la siiyo isaga oo leh xaalado raaxo leh kaydinta saxda ah. Ka dib oo dhan, baradho waa in ay sii hayaan nafaqada iyo dhadhanka cuntada ilaa laga goosto goosashada cusub, sababtoo ah waxaan u isticmaali karnaa cuntada sannadka oo dhan. Iyada oo ay ku habboon tahay kaydinta ku habboon xaaladaha saxda ah, tanina ma aha mid aad u adag in la gaaro. Sidaa darteed, ka hor inta aanad khudradda ka dhigin kaydinta, wax walba waa in la tixgeliyaa. Diyaarinta baradhada. Kaydinta muddada dheer ee baradho guri dabaq ah xilliga jiilaalka waxaa keliya oo lagu hubin karaa diyaarinta haboon.
Heerkulka ugu habboon ee kaydinta baradhada (wakhti kasta oo sanadka ah) waa 2-3 digrii oo kuleyl ah. Heerkulkani, waa nasasho, taas oo ah, xididada ma koraan oo waxba ma qabtaan.
Haddii heerkulku sareeyo, digriiga ayaa bilaabi doona inuu "tooso", diyaariyo beeritaanka guga.
Nidaamka "baraarujinta" digriiga baradho:
Indhaha ayay toosiyeen.
Iyo in diirka (ee lakabka sare) wuxuu bilaabaa inuu isku uruuro solanine (walax sun ah). Haddii heerkulku uu kudhowaado 0 digrii, tani waxay si weyn u saamayn doontaa dhadhanka baradhada. Waxa uu yeelan doonaa dhadhan macaan oo dhicin kara dhadhanka saxan kasta.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in starch uu sonkorta ku boodo heerkul hooseeya, halka barafow yar oo barafaysan la bilaabo inuu si deg deg ah uga sii daro.
Shuruudaha huurka hawada inta lagu jiro kaydinta baradhada:
Qoyaanka ugu fiican waa in la siiyaa heerka 80 - 85%, oo leh xuduudaha sida, digriiga "ma qalajin", taas oo ah, ma waayi doono xajmigooda inta lagu jiro kaydinta.
Iyadoo hawada qalalan, dhadhanka ah ee baradho baco, digriiga noqdaan qalalan iyo jilicsan, juiciness baaba'aya.
Haddii, lid ku ah, in bakhaarada khudradda waxaa jiri doona qoyaan aad u sareeya, ka dibna muuqaalka cudurada fangas iyo duufaan dalagyada xididka ah ayaa suurtagal ah.
Xaaladaha kaydinta baradhada:
Hoos-u-dhiska waa in la hubiyaa.
Lama oggola in lakabiyo kaydka hoose ee dukaanka khudradda, daboolo dhulka, linoleumka iyo walxo kale oo la mid ah, sababta oo ah qoyaanku si sahlan ayaa u uruurin doona oo caaryadu si tartiib ah u muuqan doonaan. Waxaa ugu wanaagsan in la buuxiyo hoosta oo leh ciid, ama quraar qurub ama dhagaxyo (qalabka nuugaya si fiican qoyaanka).
Laba toddobaad ka hor inta aan la dhigin bakhaarka khudradda ee digriiga, waa in la nadiifiyaa. Ka dib daaweyn kasta, waa lagama maarmaan in la xiro vault muddo laba maalmood ah kadibna si fiican u hawo.
Ma oggolaan karno qorraxda tooska ah si ay u dhacdo baradho, sababta oo ah waxay u bilaabi doontaa inay isku ururiso glycoside sunta ah (oo cagaar noqda), ma noqon doonto wax aan cuni karin.
Maya "jaarka" waa mid aan loo baahnayn dalagga asaasiga ah, marka laga reebo kaliya marka laga reebo xidigaha (waxay u fiicantahay in ay ku fidiso dusha sare ee barafka) - tani waa "deris" wanaagsan.
Beetro si fiican u nuugo qoyaan xad dhaaf ah, halka xididkani aanu waxyeello u geysan.
Haddii ay tahay inaad ka saarto baradho caleenta ah, ka dibna waxaad u baahan tahay inaad soo qaadatid mid kaliya oo tuber, laakiin sidoo kale kuwa jiifa ee soo socda (xiriirka dhow, dhammaan digriiga ku dhow waa infekshin, xitaa haddii ay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba).
Waa lagama maarmaan in laga hortago in dukaanku ka baxo dukaanka ka baxsan cayayaanka kala duwan: jiirka, jiirarka iyo slugska.
Dhibaatooyinka kaydinta baradho ayaa sabab u ah istaandarka iyo biyaha, kuwaas oo laga helo tiro badan oo digriiga ah.
Ma aha in qof kastaa leeyahay dukaanka khudradda, dad badan ayaa daneynaya siyaabo kale oo loo kaydin karo baradhada: balakoonka, sanduuq.
Waxaa jira dhowr marxaladood oo muhiim ah oo kaydinta baradho ah ee kaydinta, iyo mid kasta oo ka mid ah waxay u baahan doontaa sameynta noocyo kala duwan oo qoyaan iyo heerkulbeeg.
Marka hore - Isla markiiba ka dib goosashada, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro digriiga baradho iyo iyaga oo qalalan. Muddada muddadani waxay noqon doontaa qiyaastii 7 ilaa 12 maalmood. Heerkulka loo baahan yahay marxaladani waa inuu u dhexeeyo 15 iyo 17 darajo.
Labaad - Tani waa xilli loogu yeero bogsashada, taas oo ah, muddada dhaawacyada qaarkood, iyo sidoo kale Bisaylka digriiga. Heerkulka halkan waa in la sara kiciyaa ilaa 20 darajo iyo qoyaanka hawadu waa inay ahaadaan qiyaas ahaan 90-95%.
Saddexaad - Intaas ka hor, ka hor inta aan la dhigin baradhada kaydinta muddada dheer, waa lagama maarmaan in la qaboojiyo. Heerkulka waa in la yareeyo si tartiib tartiib ah (maalin walba 0.5 darajo) oo keenso ilaa 3 digrii.
Afaraad - mudada kaydinta ugu muhiimsan. Qoyaanka loo baahan yahay waqtigan waa in lagu hayaa qiyaastii 80 - 85%. Iyada oo hawo-qabsasho wakhti ah, marka hawada gudaha iyo dibedda isku dhafan tahay, waa fududahay in lagu gaaro waxqabadka ugu wanaagsan.
Fifth - Ka hor inta aanad bilaabin baradho, digsi digriiga. Tani waxay ka ilaalin doontaa dhaawaca farsamada aan loo baahnayn, sida baradho la qaboojiyey waa kuwo jilicsan.
Hababka loo abaabulo kaydinta xilliga qaboobaha
Habka kaydinta ayaa loo tixgeliyaa ugu fudud, sababtoo ah uma baahna wax kharash ah oo khaas ah.
Ma jirto baahi loo qabo in lagu iibsado roogaga iyo weelasha gaarka ah, sida baradhada si fudud loogu shubo agagaarka kaydka oo dhan. Waxa kaliya ee loo baahan yahay in la hubiyo waa hawo wanaagsan.
Caadi ahaan, habkani wuxuu isticmaalaa marin-haweedka dabaysha.
Habka ugu weyn ee la oggol yahay:
fududahay in la gooyo oo la kariyo bataatada;
si buuxda uga faa'iideysan karo dhulka oo dhan.
Faa'iidooyinka kala doorashadani waa:
Hal qol waxaa suurtagal ah in lagu kaydiyo noocyo kala duwan oo baradho ah.
Awoodda aad u habayn karto macaamilka tartiib tartiib ah (inta lagu jiro xilliga xagaaga). Ka dib oo dhan, weelasha (qadarka saxda ah) ayaa qayb ahaan loo rogi karaa inay kululaadaan ka hor intaan la iibin, halka inta kale ay weli ku qaboojiyaan wakhtigan.
Intee in le'eg ayuu kaydka ku dhici karaa?
Muddada kaydinta xididka waxay ku xiran tahay noocyada kala duwan:
Baradhada noocyada hore waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan 5 bilood, illaa December waa ka fiican tahay in la isticmaalo.
Noocyada xilliga bartamihii iyo badhkii ayaa la keydiyaa ilaa 5-7 bilood.
Noocyada dambe ayaa lumin karaan sifooyinkooda mudo 10 bilood ah, oo ay bixiyaan wax sax ah.
Baradhadu waa in lagu keydiyaa diirka bislaaday. Kaydinta baradhada Maqaasi ama qolka hoose ayaa ah habka ugu caansan. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la barbardhigo baradho leh dhisme alwaax ah oo ka sameysan derbiyada aasaasiga ah ama lebbiska.
Natiijo ahaan, waxaan dhihi karnaa taas haddii la rabo, baradho waa la hayn karaa oo dhanna waa la gaari karaa ilaa goynta soo socota. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad dadaal u sameyso tan. Waxaana ugu mahadcelinayaa dukaamada khudradeed ee casriga ah, oo lagu dhisay tiknoolajiyad cusub, nidaamyada hawo-mareemka ee tamarta si fudud loo abuuro shuruudaha ugu fiican ee kaydinta.
Boggayaga internetka waxaad ka heli kartaa macluumaad ku saabsan inta aad ku kaydin karto baradho la fiiqay, oo ay ku jiraan biyo qaboojiyaha, iyo haddii ay suuragal tahay in la ilaaliyo khudradda cagaaran oo la kariyey.